35 Zvino Jehovha akataura naMosesi pamapani erenje eMoabhi pedyo naJodhani+ kuJeriko, achiti: 2 “Rayira vanakomana vaIsraeri kuti vape vaRevhi maguta+ okuti vagare pakati penhaka yavo, uye kuti vape vaRevhi mafuro emaguta akavapoteredza.+ 3 Maguta acho achava nzvimbo yokuti vagare, mafuro awo ari ezvipfuwo zvavo, ezvinhu zvavo neemhuka dzavo dzose dzomusango. 4 Mafuro emaguta, amuchapa vaRevhi, achatangira parusvingo rweguta obuda kunze makubhiti chiuru kumativi ose. 5 Munofanira kuyera kunze kweguta kurutivi rwokumabvazuva makubhiti zviuru zviviri, kurutivi rwokumaodzanyemba makubhiti zviuru zviviri, kurutivi rwokumavirira makubhiti zviuru zviviri uye kurutivi rwokuchamhembe makubhiti zviuru zviviri, guta riri pakati pacho. Aya ndiwo achava mafuro emaguta acho. 6 “Aya ndiwo maguta amuchapa vaRevhi: maguta matanhatu okupotera,+ amuchapa kuti muurayi atizire ikoko,+ uye muchavapa mamwe maguta makumi mana nemaviri tisingabatanidzi aya. 7 Maguta ose amuchapa vaRevhi achava maguta makumi mana nemasere, iwo pamwe chete nemafuro awo.+ 8 Maguta amuchapa achatorwa panhaka yevanakomana vaIsraeri.+ Vazhinji muchavatorera mazhinji, asi vashoma muchavatorera mashoma.+ Mumwe nomumwe achapa vaRevhi mamwe emaguta ake, zvichienzanirana nenhaka yake yaachatora kuti ive yake.” 9 Zvino Jehovha akaramba achitaura naMosesi, achiti: 10 “Taura nevanakomana vaIsraeri, uti kwavari, ‘Muchayambuka Jodhani kuti muende kunyika yeKenani.+ 11 Munofanira kusarudza maguta anokuitirai nyore kusvika. Iwo achava maguta okuti mupotere, uye muurayi anouraya mweya asingaiti nemaune anofanira kutizira ikoko.+ 12 Maguta acho achava kwamuri kwokupotera pamutsivi weropa,+ kuti muurayi arege kufa kusvikira amira pamberi peungano kuti atongwe.+ 13 Maguta amuchavapa, iwo maguta matanhatu okupotera, achashandiswa nemi. 14 Munofanira kuvapa mhiri kuno kwaJodhani maguta matatu,+ uye munofanira kuvapa munyika yeKenani maguta matatu.+ Iwo achava maguta okupotera. 15 Maguta matanhatu aya achava kwokupotera kuvanakomana vaIsraeri nokumutorwa nokumugari wokune imwe nyika+ ari pakati pavo, kuti ani naani anouraya mweya asingaiti nemaune+ atizire ikoko. 16 “‘Zvino kana achinge amurova nechishandiso chesimbi zvokuti anofa, iye imhondi.+ Chokwadi mhondi yacho inofanira kuurayiwa.+ 17 Kana achinge amurova nedombo duku ringamuuraya zvokuti anofa, iye imhondi. Chokwadi mhondi yacho inofanira kuurayiwa. 18 Kana achinge amurova nechishandiso chiduku chakagadzirwa nedanda chingamuuraya zvokuti anofa, iye imhondi. Mhondi yacho inofanira kuurayiwa. 19 “‘Mutsivi+ weropa ndiye anofanira kuuraya mhondi yacho. Kana akangoerekana asangana naye, iye anofanira kumuuraya. 20 Kana achinge amusunda nokuti anomuvenga+ kana kuti amutema iye akavandira+ kuti afe, 21 kana kuti amurova noruoko kuti afe nokuti anomuvenga, chokwadi muurayi wacho anofanira kuurayiwa. Iye imhondi. Mutsivi weropa anofanira kuuraya mhondi yacho kana akangoerekana asangana nayo.+ 22 “‘Asi kana achinge amusunda zvisingatarisirwi, asingamuvengi kana kuti akanda chero chinhu chipi zvacho kwaari asina kuvandira,+ 23 kana kuti dombo ringamuuraya asingamuoni kana kuti ariwisira paari, zvokuti anofa, iye anga asingavengani naye uye anga asingatsvaki kumukuvadza, 24 ungano ngaibve yatonga pakati pomuurayi wacho nomutsivi weropa maererano nokutonga uku.+ 25 Ungano+ inofanira kununura muurayi paruoko rwomutsivi weropa, uye ungano inofanira kumudzorera kuguta rake rokupotera kwaakanga atizira, uye anofanira kugara imomo kusvikira mupristi mukuru akazodzwa nemafuta matsvene+ afa. 26 “‘Asi kana muurayi akadarika muganhu weguta rake rokupotera kwaangatizira, 27 mutsivi+ weropa omuwana kunze kwomuganhu weguta rake rokupotera, uye mutsivi weropa ouraya muurayi, iye haana mhosva yeropa. 28 Nokuti iye anofanira kugara muguta rake rokupotera kusvikira mupristi mukuru afa,+ uye kana mupristi mukuru afa, muurayi angadzokera kunyika yenhaka yake. 29 Izvi zvinofanira kuva kwamuri murau wokutonga muzvizvarwa zvenyu zvose munzvimbo dzenyu dzose dzamunogara. 30 “‘Wose anouraya mweya anofanira kuurayiwa semhondi+ kana zvapupu zvichinge zvapupurira,+ asi chapupu chimwe chete hachingapupuriri mweya kuti iwo ufe. 31 Hamufaniri kugamuchira rudzikinuro nokuda kwomweya wemhondi inofanira kufa,+ nokuti chokwadi inofanira kuurayiwa.+ 32 Musagamuchira rudzikinuro nokuda kwomunhu atizira kuguta rake rokupotera, kuti atangezve kugara munyika yacho mupristi mukuru asati afa. 33 “‘Musasvibisa nyika yamugere; nokuti ropa ndiro rinosvibisa nyika,+ uye nyika haingayananisirwi pamusoro peropa rakateurirwa pairi kunze kwokushandisa ropa romunhu anoriteura.+ 34 Musasvibisa nyika yamugere, yandigere pakati payo; nokuti ini Jehovha ndigere pakati pevanakomana vaIsraeri.’”+